ယူနိုက်တက် ပြီးတော့ စပါးကို ထပ်ဖြုတ်တဲ့ ဘိုရို ၊ အနားယူတော့မယ့် လက်ဝှေ့စူပါစတား ၊ ဆိုးရှား ရလိုက်တဲ့ လျော်ကြေး တို့နဲ့ . . . နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းမျာ - xyznews.co
ယူနိုက်တက် ပြီးတော့ စပါးကို ထပ်ဖြုတ်တဲ့ ဘိုရို ၊ အနားယူတော့မယ့် လက်ဝှေ့စူပါစတား ၊ ဆိုးရှား ရလိုက်တဲ့ လျော်ကြေး တို့နဲ့ . . . နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းမျာ
March 2, 2022 March 2, 2022 - by Editor
ယမန်နေ့ ညက ကစားခဲ့တဲ့ FA Cup ပွဲစဉ်တွေ မှာတော့ မစ်ဒယ်ဘရော့ အသင်းဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် ထိပ်သီး တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး အသင်းကို အချိန်ပိုထိ ကစားပြီး ၁-၀ နဲ့ အနိုင် ရကာ နောက်တဆင့်ကို တက်လှမ်း သွားနိုင် ခဲ့ပါတယ် ။
မစ်ဒယ်ဘရော့ ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ အဆင့် တုန်းကလည်း ပရီးမီးယားလိဂ် ထိပ်သီး တသင်း ဖြစ်တဲ့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ကို ဖြုတ်ချ ခဲ့တဲ့ အသင်း ဖြစ်ပါတယ် ။
အခြားပွဲစဉ်တွေ မှာတော့ မန်စီးတီး က ပီတာဘရော့ အသင်းကို ၂-၀ ၊ ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် က စတုတ်စီးတီး ကို ၂-၁ နဲ့ အသီးသီး အနိုင် ရရှိ ခဲ့ကြပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ အသင်းက သူတို့ဟာ ချဲလ်ဆီး နောက်ခံလူ ဆီဇာ အက်ဇ်ပီလီ ကွီတာ ရဲ့ နောက်ဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက် ကို စောင့်ဆိုင်း နေပြီး ချဲလ်ဆီး ကနေ ထွက်ခွာဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါက အကြို စာချုပ် ချုပ်ဆို သွားဖို့ စီစဉ် ထားတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ဟာ နည်းပြ အိုလေ ဂန်နာ ဆိုးရှား ကို ထုတ်ပယ် ခဲ့တဲ့ အတွက် လျော်ကြေး ပေါင် ၇.၅ သန်း ပေးချေ ခဲ့ရတယ်လို့ သတင်းထွက်ပေါ် လာခဲ့ ပါတယ် ။
ရုရှ ရဲ့ ကျူးကျော်မှုကြောင့် အားကစား လောက အတွင်းက ရုရှ ဆက်နွယ်သူတွေ ဆက်တိုက် အခက်တွေ့ နေပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး ပိုင်ရှင် ရုရှ သူဌေး အေဘရာမိုဗစ် သာ အသင်းကို ထုတ်ရောင်းပါက ဝယ်ယူဖို့ စောင့်ဆိုင်း နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်း ၃ ခု အထိ ရှိနေပြီး အဲဗာတန် နဲ့ ဆက်နွယ်နေတဲ့ ရုရှ သူဌေး အူစမန်နော့ဗ် ကိုလည်း အဲဗာတန် နဲ့ လက်တွဲ ဖြုတ်ဖို့ ဖိအားပေး နေကြတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
တင်းနစ် အဖွဲ့ချုပ် ကတော့ အသင်းလိုက် ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ရုရှ ကိုယ်စားပြု အသင်းတွေကို ထည့်သွင်း ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် မပြုတော့ ပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် တဦးချင်း ပြိုင်ပွဲတွေ မှာတော့ ရုရှ အမှတ်တံဆိပ်တွေ အသုံးမပြု ဘဲ ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် ပြုထားသေးတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
ဒါကြောင့် ယူကရိန်း တင်းနစ်မယ် အလီနာ စဗီတိုလီနာ ဟာ ကြားဝင်စေ့စပ်ပေးမှု အပြီးမှာတော့ ရုရှ တင်းနစ်မယ် ပိုတာပိုဗာ နဲ့ ယှဉ်ပြိုင် ကစားဖို့ ပြန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ ပါတယ် ။
စဗီတိုလီနာ ဟာ ယူကရိန်း အလံ ရဲ့ အရောင်ပါ ဝတ်စုံကို ဝတ်ဆင် ခွင့် ရမှာ ဖြစ်ပြီး ပိုတာပိုဗာ ကတော့ နိုင်ငံမဲ့ ကစားသမား အဖြစ် ကစားရမယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
ရုရှ ကလပ် ဒိုင်နမို မော်စကို အသင်းမှာ ကစားနေတဲ့ ယူကရိန်း ကစားသမား အန်ဒရီ ဗိုရိုနင် ကတော့ ရုရှ ကလပ် ကနေ ထွက်ခွာ ခဲ့ပြီလို့ ထုတ်ဖော်ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ အသင်းဟာ အေစီမီလန် ကွင်းလယ်လူ ဖရန့် ကတ်ဆီ ကို တရားဝင် ကမ်းလှမ်းမှု ပြုလုပ် လိုက်တယ်လို့ သတင်းထွက်လာခဲ့ ပါတယ် ။
အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် နဲ့ နွေရာသီမှာ စာချုပ် သက်တမ်းကုန်မယ့် ဟတ်တာ ဟာရဲရား ကို အမေရိကန် ကလပ် ဟတ်ဆန် ဒိုင်နမို က ၂၀၂၅ အထိ စာချုပ် နဲ့ ခေါ်ယူဖို့ အကြို သဘောတူညီမှု ရယူ သွားနိုင်ခဲ့ပြီလို့ သိရ ပါတယ် ။
မန်ယူနိုက်တက် အားကစား ဒါရိုက်တာ ရာထူးကို ရယူ ထားတဲ့ ဒါရင်း ဖလက်ချာ က အခုရာသီမှာ အငှားထွက် ကစားနေတဲ့ လူငယ်တွေ ဟာ လာမယ့် ရာသီကြို ခရီးဉ် ကို ခေါ်ယူသွားပြီး အခွင့်အရေး ပေးသွားဖို့ စီစဉ် ထားတယ်လို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
အေစီ မီလန် နဲ့ အင်တာမီလန် တို့ ကစားခဲ့ကြတဲ့ ကိုပါ အီတလီယာ ဆီမီး ဖိုင်နယ် ပထမ အကျော့ ကတော့ ဂိုးမရှိ သရေ ရလဒ် နဲ့ ပြီးဆုံး သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဗြိတိန် ဂုဏ်ဆောင် လက်ဝှေ့ အကျော်အမော်ကြိး တိုင်ဆန် ဖျူရီ ကတော့ လာမယ့် ဧပြီ ၂၃ ရက်နေ့မှာ ဒီလီယံ ဝှိုက် နဲ့ ထိုးသတ်မယ့် ပွဲအပြီးမှာ လက်ဝှေ့ ကနေ အနားယူတော့မှာ ဖြစ်ကြောင်း ယမန်နေ့က အတည်ပြု ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါ့အပြင် ဖျူရီ က ရုရှ ရဲ့ ကျူးကျော်မှုကို ရှုံ့ချ ခဲ့ပြီး ဗြိတိန်သာ စစ်ပွဲထဲ ဝင်ပါ ခဲ့ပါက သူက ရှေ့ဆုံးကနေ စာရင်းပေး သွားမယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့ ပါတယ် ။
Previous Article မစ်ဒယ်ဘရော့ အသင်းကို ရှုံးနိမ့်ပြီး အက်ဖ်အေဖလား ပြိုင်ပွဲက ထွက်ခွာ ခဲ့ရတဲ့ အပေါ် တုန့်ပြန် ပြောကြားလိုက်တဲ့ ကွန်တီ
Next Article နာဘီ ကီတာရဲ့ ဖြတ်ထုတ်မှုကြောင့် ထရက်ဗာ ချာလိုဘာ ဟာ အဝတ်လဲခန်းထဲမှာပဲ ဒဏ်ရာချုပ်ခဲ့ရကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောဆိုလိုက်တဲ့ တူချယ်